Asisukume sizilungiselele ukuguquguquka kwesimo sezulu, kuloba uBusi Mavuso - Umbele I SMME Profiles I Labour I Economics I Agriculture I Executive Interviews I Personal Finance News
Asisukume sizilungiselele ukuguquguquka kwesimo sezulu, kuloba uBusi Mavuso
ISIBHICONGO esenzeke KwaZulu-Natali sibuhlungu. Ukufa kwabantu nokulahleka kwemisebenzi kukhulu. Inkulumo kamengameli (ngoMsombuluko) ikhombisa indlela uhulumeni ayisukumela ngayo le ndaba kanjalo nezifundo esizitholile ngokubhekana nenhlekelele eminyakeni embalwa edlule.
Isifundo esikhulu wukuthi iyiphi indlela yokuhlinzeka usizo ngokushesha futhi kuqinisekiswe ukuthi lufinyelela kubantu abafanele ngaphandle kwenkohlakalo.
Kumqoka ukuthi osomabhizinisi, uhulumeni nezinhlangano zomphakathi basebenzisane. Lobu budlelwano buyinsika ekusizeni iKwaZulu-Natali kanti iSolidarity Fund izobamba iqhaza elimqoka kuloku.
Lesi sikhwama sesikhombisile ukuthi siyindlela esebenza kahle yokuqoqa nokusabalalisa iminikelo futhi abantu bangasethemba. Sihlanganisa abaholi bamabhizinisi, izinhlangano zomphakathi nohulumeni ukuqikelela ukuthi yonke into yenzeka ngononina.
Izidingo eziphuthumayo zicacile njengoba imiphakathi elinyalelwe idinga usizo oluphuthumayo futhi izama nokubhekana nokulahlekelwa kwayo. Kungithokozisile ukubona inqwaba yamabhizinisi, okukhona kuwo namalungu eBusiness Leadership South Africa (iBLSA), ephuthumisa usizo okukhona kulona iminikelo yemali nezimpahla kwabathintekile.
Ngiyancoma umsebenzi wezinhlangano ezingenzi nzuzo eziphuthume ukuyolekelela futhi eziyindlela ebalulekile yokuthi sihambise usizo kwabathintekile.
Njengoba sekushiwo ngokusemthethweni ukuthi izwe libhekene nenhlekelele, kusho ukuthi uhulumeni usuzokwazi kahle ukuthi usizo lufinyelele kahle ezindaweni ezithintekile ukuze kutakulwe abasale dengwane. Ukusetshenziswa kwama-voucher ukuze abantu bathenge izimpahla zokuvuselela imizi yabo wumqondo ophusile kodwa kuzofanele kugadwe ukuthi ama-voucher afinyelela kubantu abafanele.
Ukukhipha ama-voucher okuthenga izimpahla zokwakha yindlela enhle yokuqikelela ukuthi imali isetshenziselwa okufanele.
Ukubheka nokuthola abantu yikona okumqoka kanjalo nokuletha usizo kwabahlwempu. Kepha kumqoka nokubheka ukuthi umnotho uthinteke kanjani ngenxa yezikhukhula, ikakhulukazi emizileni yokuthutha izimpahla.
Mkhulu umonakalo emnothweni. Kunenqwaba yamabhizinisi acekeleke phansi nesitoko sawo futhi angakakwazi ukuvula ngenxa yezikhukhula. Kunezigidigidi zezimpahla ezilimele. Imizila eminingi yokuthutha izimpahla akuhambeki kuyona, nokukhinyabeza umnotho. Amachweba acekeleke phansi futhi awasebenziseki kanjalo nemigwaqo.
Ukuhlenga abantu yikona okuphuthuma kakhulu. Kepha kumqoka futhi nokuthi osomabhizinisi neziphathimandla bagxile ekuvuseleleni imizila yezokuthutha. Isimemezelo (sangoMsombuluko) sigxile kahle impela ekuvuseleleni imigwaqo, ikakhulukazi uN2 noN3. Ukubambezeleka okungenasidingo ekubuyiseleni isimo kwesejwayelekile kuzowulimaza kakhulu umnotho kuholele ekupheleni komsebenzi nokungena kwemali.
Ukuvuselela (umnotho) kuzoba mqoka njengoba sizokwakha kabusha ingqalasizinda. Imigwaqo eminingi nengqalasizinda yamanzi kulimele. Ngiyathemba le nhlekelele izokwenza sibhunge ngokuthi yini thina esiyenzayo siyizwe ukulungiselela ukuguquguquka kwesimo sezulu.
Umonakalo owenzeke KwaZulu-Natali ukhombisa ukungalandelwa kwemithetho ekhona nokunganakekelwa kwengqalasizinda. Kwezinye izindawo ingqalasizinda ayisebenzanga ngoba ibinganakekelwa ngendlela efanele kodwa kukhona nokuthi eminye imizi ibiyakhiwe ngokungemthetho kanjalo nasezakhiweni ebezakhiwe ezindaweni okulula ukuthi ziguguleke uma kuba nezikhukhula.
Nokho ngisho nengqalasizinda enakekelwayo ayikwazi ukubhekana nomphumela omubi wokuguquguquka kwesimo sezulu. Ukushoda kwamanzi nesimo sezulu esiguquka njalo yinto esesizophila nayo.
Umemgameli ukubeke kahle (ngoMsombuluko) ukuthi le nhlekelele izothinta izwe lonke nokuthi isimo sezulu singahlasela nakwezinye izingxenye zezwe.
Umengameli usungule ikhomishini ebheka ukuguquka kwesimo sezulu ngoDisemba wango-2020 enezinhlaka ezihlukene; nokukhona kuzona nosomabhizinisi. Le khomishini igxile ekuqinisekiseni ukuthi sishintsha kahle ekubeni wumnotho othembele ezintweni zamandla ezenziwe ngamalahle negesi ukuze sisebenzise lowo ongayilimazi imvelo.
Nokho lesi sibhicongo esidalwe yizikhukhula sikhombisa ngokusobala ukuthi kumele siphuthume sibheke izinselelo ezidalwa wukuguquguquka kwesimo sezulu emnothweni wethu kusukela kwezolimo kuya kwezokukhiqiza.
Kumele sishintshe umnotho wethu siqikelele ukuthi siyakwazi ukumelana nokuguquguquka kwesimo sezulu futhi kumele sikwamukele ukuthi ushintsho selwenzekile, nolubeka impilo yethu engozini.
Kumele sifunde futhi sihlole ingozi kwingqalasizinda yethu futhi sizibuze ukuthi ngabe sikulungele yini okuzayo.
Izinhlangano zosomabhizinisi zizimisele ukusiza ukuthi kuhlolwe ingozi. Kungakuhle sifunde kulesi sibhicongo esenzeke KwaZulu-Natali, nokungasiza uma sekuvuselelwa ukuthi kwenzeke ngendlela efanele.
Nokho kungakuhle siqikelele ukuthi siphucule izindlela zokuthi ezinye izingxenye zezwe zikwazi ukumelana kangcono nokuguquguquka kwesimo sezulu ukuze kungaphinde kuthinteke impilo nemisebenzi ngale ndlela okwenzeke ngayo ngesonto eledlule.
Into emqoka wukuthi isifundazwe sivuseleleke futhi izinhlangano zosomabhizinisi zizokweseka loku. Kepha kumele sisheshe futhi ekufundeni izifundo ezizoqikelela ukuthi izwe lonke liyakwazi ukumelana nesimo.
Ngizosebenzisana nezinhlangano zomphakathi esisebenzisana nazo ukuqikelela loku. Sithi mayiduduzeke imindeni eshonelwe futhi siyazwelana nabasebheka abantu basemakubo.
UMnu uDondo Mogajane usebenzele umNnyango wezeziMali iminyaka ewu-23 kanti uzothi khumu ngoJuni. Sekuyiminyaka lo mnyango uphethwe kahle futhi uvikela intando yabantu, yize kukuningi okungahambi kahle nenkohlakalo kwezinye izindawo.
Ngiyathemba lo mnyango unenqwaba yabantu abavuthiwe abazosisiza ukwenza ukuthi umnotho wethu uhlale uhlelekile. Siyabadinga abantu abafana noMogajane abalimelayo iqiniso ngisho kunengcindezi futhi abawaziyo umsebenzi wabo.
UNksz uMavuso uyisikhulu esiphezulu seBLSA
Asizilungiselele ukuzivikela kwizikhukhula ngokuzayo, kuloba uNtokozo Biyela
Nakuba efundele omunye umsebenzi, uthando lwakhe lwezinto zokugqoka ezinemibala egqamile lumholele kwimfashini. Uxoxe noSLINDILE KHANYILE